Global Voices teny Malagasy » Tapany Roa Amin’ny Fiainana : “Tsy Ho Sahiko Velively Ny Hiaina Any Bolivia izay iainako Eto Espaina” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2015 3:42 GMT 1	 · Mpanoratra Ana Hernández Nandika (fr) i Amélie Marin, avylavitra
Sokajy: Bolivia, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Ity no fihaonana fahatelo amin'ilay andianà antsafa itrandrahana ireo zavatra iainan'ny Amerikàna Latina izay mandao ny firenena niaviany hikatsaka fomba fiaina vaovao sy hafa, izay azonareo vakiana ato . Navoaka voalohany tao amin'ny biloagin'i Ana  ity antsafa manaraka ity, ary ao anatin'ny tovana amin'io bilaogy io natokana ho an'ny antsafa.  Ao anatin'ity lahatsoratra ity i Ana Hernández dia miresaka amin'i Diana Dorado Cañellas, tovovavy Boliviana nandao ny fireneny efa ho roa ambinifolo taona lasa izao. Ho an'i Diana, nitondra ho amin'ny fiainana misasaka roa izany, ka mitàna toerana be ao anatiny ny fahatapahan'ny fifanarahana sy ny fitàran'ny fisainana.
Eo ny hafanana andavanandro, ary miaraka amin'ny fiovàny tampoka manome anao ny hafanana sahaza, dia avy eo miditra anaty tontolo mangitsy, sy mitoka-monina. Tany am-piandohana, tsy te-hijanona mihitsy ianao. Ny fanirianao dia ny hiverina any Amerika Latina, avy eo tsy izay intsony ny zava-nitranga. Adino izany avy eo ary dia manomboka mahatsiaro ho metimety ny tena. […] Tamin'izany taona izany, ny voalohany, nanao asanà la vendimia  (mpioty voaloboka) aho ary tao an-tsaina hatrany ny eritreritra hiverina hody any Bolivia amin'ny alàlan'ny vola voaangona. Saingy rehefa tonga tao ampaosiko ny vola, dia hevitra an'arivony maro indray no tonga tao an-tsaiko, mba hanararaotra hampiasa izany ao Espaina.
Raha mikasika ny fanarahana vaovao indray, mahita i Diana amin'izao fotoana izao fa somary tsy maharaka izay miseho any amin'ny tany nahaterahany. Ny fifandraisany amin'ny andavanandron'i Bolivia dia amin'ny alàlan'ny fianakaviany sy ireo vavahadin-tserasera niomerika toy ny El Deber  na ny fantsom-pahitalavitra Unitel , na Facebook. Feno potipoti-pahatsiarovana ny tantaran'i Espaina sy Bolivia ao amin'ny fijorona vavolombelona nataon'i Diana. Sy ny fomba fijery ny firenena roa tarafina avy any ivelany. Ao anatin'ny zavatra niainan'ity tovovavy Latino-Amerikana ity dia mifangaro ny maha-izy ny tena, ary mitohy ny fivoarana. Amin'izay niainany, mirafitra ao anaty sary iray ny eto sy ny any, ary tsy voatery foana hilaza zavatra iray mitovy:
Efa roa ambinifolo taoan aho izao no niaina lavitra an'i Bolivia. Ary na dia toa kely aza izany: ho ahy, antsasaky ny fiainako izay. Kanefa, ireharehako sy mahafaly ahy ny milaza hoe Boliviana aho. Na dia inoako aza fa, raha jerena avy lavitra, ny hany zavatra mba fantatry ny olona momba an'i Bolivia dia i La Paz, mbola any amin'ny toerana faharoa hatrany no misy an'i Sucre. Tiako ihany koa ny hoe ao amin'ny fireneko no misy ny tanàna avo indrindra manerantany, sy ny hoe izahay no manana ny salar (tany efitra rakotra sira) goavana indrindra, tahaka ny anananay zavatra maro hafa ao Bolivia, izay nambara ho Lovan'ny Taranak'Olombelona. Izany rehetra izany sy ny Majadito , mazava ho azy. Tsy adinoko ny sakafon'ny any.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/29/76054/
 izay azonareo vakiana ato: https://es.globalvoicesonline.org/author/ana-hache/
 bilaogy io natokana ho an'ny antsafa.: http://prensame.wordpress.com/
 la vendimia: http://es.wikipedia.org/wiki/Vendimia